Lambs Valley, New South Wales, Australia
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguYvonne
Iyilwe ngumakhi ophumelele ibhaso uPaul Witzig, i-Eaglemont yindawo entle kakhulu yeehektare ezili-100 efumaneka kwiLambs Valley High Country, imizuzu engama-30 ukusuka eMaitland, eBranxton kunye ne40mins ukuya kwizidiliya zeHunter Valley. Ngaphantsi nje kwe2 1/2 iiyure ukusuka eSydney.
I-Eaglemont ikumgama oziikhilomitha ezi-2.7 ukusuka eLambs Valley Rd kunye nendlela evaliweyo yasentabeni ekunyukela kwiiPavilions ngomphakamo oyi-400m.
I-Eaglemont Retreat inezilwanyana zasendle ezininzi ezibandakanya iikhangaru, iiEagles, iiWombats kunye neentaka ezintle zasendle ngobuninzi.
Ipropathi iqulathe iipaviliyoni ezi-3, ezi-2 zazo ziyafumaneka kwiindwendwe kunye nomnye, umnini ohleliyo.
I-pavillion yoku-1 yindlu ePhambili kunye ne-2nd pavilion yenziwe nge-studio ezi-2, zonke zibonelela ngokunethezeka, ubumfihlo kunye nemibono ephefumulayo. I-Eaglemont ilala ngokukhululekileyo abantu aba-2 ukuya kwabasi-8 ehlala abantu aba-4 kwipaviliyoni nganye.
Eli khaya leeholide liquka iNdlu yokulala ye-2 (iNdlu enkulu / i-Pavillion yokuqala) + i-2 Bedroom Studio (2nd Pavillion).
- Amaqela 1-4 aya kuba nokufikelela kwiNdlu ePhambili. (iibhedi ezi-2)
- Amaqela 1-6 aya kuba nokufikelela kwiNdlu ePhambili + 1st Studio. (iibhedi ezi-3)
- Amaqela 1-8 aya kuba nokufikelela kwi-Main House + 1st & 2nd Studio. (4 iibhedi)
Umnini uhlala kwenye yeepaviliyoni ezintathu ezimalunga nama-60m ukusuka kwipaviliyoni enkulu.
I-Eaglemont's Main Pavilion/iNdlu sisakhiwo esinemigangatho emithathu emangalisayo.
Umgangatho ophezulu: Igumbi leSitayile seLoft elinebhedi yaseKing, iheater yeoli kunye nefeni yomgangatho.
Umgangatho oPhakathi/weNqanaba lokungena: Igumbi lokuphumla elinesimo somoya, isilingi fan & indawo yomlilo, iTV, ikhitshi, indawo yokutyela esesikweni ekhokelela kwibalcony ene-hammock kunye negumbi lokuhlambela elipheleleyo eli-1 (Ibhafu eDityanisiweyo/Ishawa kunye neYangasese) kunye nendlu yangasese eyahlukileyo.
Inqanaba elisezantsi: Isicwangciso esivulekileyo sebhedi ye-Queen eneTV kunye neTafile yePool, umgangatho osezantsi ukhokelela kwindawo engaphandle kunye nomgodi womlilo.
Izitudiyo zase-Eaglemont sisakhiwo esinemigangatho emibini esinegumbi lokulala eli-2 elahlukileyo ngalinye line-ensuite, indawo yomlilo, isilingi kunye nabalandeli bomgangatho, iTV, ibalcony kunye nebhedi enkulu yaseKing. Elinye lala magumbi lingajongana nesitulo esinamavili.
Akukho bamelwane! Yiza nekhamera yakho, iimbono ziyamangalisa !!!
Qaphela: Nceda ufunde ii-captions kwiifoto ukuchaneka.
Ijikelezwe ziinduli nemilambo emihle, iLambs Valley inekhubalo lelizwe elinobuhlobo.
Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho kwaye siyakukhuthaza ukuba wenze okuninzi kolu hlaselo. Sikhona xa kufuneka kungenjalo anizova kuthi.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-16406-3
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$355
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lambs Valley